साउदीमा नेपाली कामदारहरु समस्यामा,१० महिनादेखि तलव पाएनन् - Nepali Sandesh
२१ साउन, काठमाडौं । साउदी अरवमा हजारौं आफ्ना नागरिक भोक्कै भएपछि भारत सरकारले उद्दार सुरु गरेको छ । तर, नेपालको अवस्थाबारे अहिलेसम्म सरकारले कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन ।
‘महिना मर्नासाथ तलव बुझ्ने कामदारले लामो समय तलव नपाउँदा अनेक समस्या भोग्नु परेको छ’ श्रम सहचारी अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने,’तलवबाटै रासन किने खानुपर्नेलाई बढी समस्या भएको छ ।’
समस्यामा पर्नेको तथ्यांक छैन
तेलको मूल्यमा आएको गिरावटसँगै साउदीमा पनि रोजगारदाता कम्पनीहरु आर्थिक समस्याको शिकार भएको बताइएको छ ।
यसैका कारण नेपालीसहित विदेशी कामदार यसको चपेटामा परेको अन्तार्रष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले पनि जनाएका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले साउदी अरबमा रहेका ३० लाख भारतीय मध्ये १० लाख बढीले खाद्यान्न संकट झेलिरहेको भन्दै उद्दारको हिल थालेकी छन् ।
तलव नपाएको भन्दै उजुरी तथा गुनासो गर्ने नेपालीको संख्या निकै उच्च दरमा बढिरहेको साउदीको रियादस्थित दूतावासले जनाएको छ । ‘खानै नपाएर भोकमरीकै चपेटामा परेको भनेर गुनासो आएको छैन’ श्रम सहचारी अधिकारीले भने, ‘तर, विगत ४ महिनालाई तुलनात्मक रुपमा केलाउने हो भने यो बीचमा तलव नपाएको भन्दै गुनासो गर्ने कामदारको संख्या लगातार बढिरहेकै छ ।’
पछिल्लो समयमा नेपालीरुले कम्पनीले तलव उपलब्ध नभएको भन्दै दूतावासमा सामूहिक रुपमा नै उजुरी दर्ता गराउने गरेका छन्
तर, समस्यामा परेका नेपाली कामदारको एकीन तथ्यांक छैन । तलव उपलब्ध गराउन पहल गर्न आग्रह गर्दै महिनामा ५ देखि ७ सय कामदारले दूतावासको सहयोग माग्न थालेको सहचारी अधिकारीले जानकारी दिए । ‘ठ्याक्कै तथ्यांक तयार गरेका छैनौं । तर, हामी कहाँ गुनासो गर्नेहरुको संख्या सानो भने छैन’ अधिकारीले थपे,’फाटफुट रुपमा भन्दा पनि अहिले सामूहिक रुपमा उजुरी गर्नेहरु बढेका छन् ।’
१० महिनादेखि तलवबिहीन !
पछिल्लो समयमा नेपालीरुले कम्पनीले तलव उपलब्ध नभएको भन्दै दूतावासमा सामूहिक रुपमा नै उजुरी दर्ता गराउने गरेका छन् । अहिले ५०/१०० जना कामदारले एकैपटक गुनासो गर्ने क्रम बढेको दूतावासले जनाएको छ ।
अधिकारीहरुका अनुसार साउदीमा १० महिनादेखि तलब नपाएका नेपालीहरु पनि छन् । तलब नदिएपनि कामदार बाध्यात्मक रुपमा श्रम गरिरहेकै छन् । ‘३ महिनादेखि अधिकतम् १० महिनासम्म तलव नपाएका कामदार हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन्’ अधिकारीले भने,’हामीले रोजगारदाता कम्पनी र सरकारी श्रम अधिकारीलाई पत्राचार गरेर यसलाई समाधान गर्न पहल गरेका छौं ।’
दूतावासको पहलमा धेरै कामदारको समस्या सामाधान भएको र कतिको हुने चरणमा रहेको दावी अधिकारीहरुको दाबी छ । कतिपय कामदारको समस्या हल गर्न कम्पनीहरुमै गएर कुरा गर्ने गरिएको दूतावासले जनाएको छ ।
किन यस्तो समस्या ?
तेल उत्पाादक साउदीसहितका खाडी देशमा ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिकहरु रोजगारी गर्छन्् । तर, विगत केहि महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले यी देशहरु निकै ठूलो आर्थिक समस्यामा परेका छन् । कुल गाह्रस्थ उत्पादन ४५ प्रतिशत तेलको योगदान हुने साउदीमा उठ्ने कुल राजश्वको ८० प्रतिशत रकम तेल र त्यसैसँग सम्बिन्धत उत्पादनमा निर्भर छ ।
त्यसैले तेलको मूल्यमा गिरावट आउादा साउदी अरेयिबा सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् । विशेषगरी सरकारसँग विभिन्न कामको जिम्मा लिएर सरकारी भुक्तानीका भरमा चल्ने कम्पनीहरु बढी आर्थिक समस्यामा छन् ।
आर्थिक समस्याले समयमै सरकारी भुक्तानी प्राप्त नहुँदा निर्माण क्षेत्रका कम्पनीमा धेरै समस्या देखिएको छ ।
सरकारको राजश्व नै घटेपछि देशको आर्थिक चक्र प्रभावित हुँदा बजारमा विभिन्न उत्पादनको माग घटेको छ । नागरिकसँगको किन्ने क्षमता कमजोर भएपछि बजारमा उत्पादनहरुको खपत कम भएको छ । त्यसैकारण उत्पादनमूलक कम्पनीहरु पनि कामदारलाई समयमै तलव भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् । नागरिकहरुले विलाशिताका खर्च घटाएछि सेवामूलक क्षेत्रमा पनि यस्तै असर देखिएको छ ।
यसैकारण साउदी अरबमा सयौं कम्पनीहरु बन्द भएका छन् । जसले केही नेपाली कामदार बेरोजगार भएका छन् वा धेरैले तलव पाएका छैनन् ।
दूताबासले सरकारलाई गुहार्‍यो
समस्या झनै विकराल बन्न सक्ने भन्दै रियादस्थित नेपाली दूतबासले दूतावासले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘साउदी अरेबियामा यही समस्याले कामदार आर्थिक शोषणमा पर्ने क्रम निकै बढ्ने देखिएको छ’ श्रम सहचारी अधिकारीले भने, ‘अब कामदारलाई साउदी पठाउनुअघि नै कमजोर आर्थिक क्षमता भएका कम्पनीमा नपठाउने नीति लिनुपर्छ ।’
उनले साउदीका कम्पनीहरुको ग्रेडिङ वेबसाइटमा सहजै हेर्न मिल्ने भन्दै तल्ला ग्रेडका कम्पनीमा नेपााली कामदारलाई आउन श्रम स्वीकृति दिन बन्द गर्नुपर्ने बताए । ‘काम लगाएर तलव नै भुक्तानी गर्न नसक्ने कम्पनीमा नेपालीलाई आउन अनुमति नै दिनु हुँदैन’ उनले भने,’अब म्यानपावर व्यवसायी र वैदेशिशक रोजगार विभागले छिट्टै यस विषयमा निर्णय लिलनुपर्छ ।’
गत एकवर्षमा १ लाख ३८ हजार ५ सय युवा साउदीमा कामका लागि पुगेका छन् । यो बीचमा साउदी जाने युवाको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२मा ९८ हजार २ सय युवा साउदी पुगेका थिए ।